Vashandisi veWiricheya: Maitiro Ekudzivirira Mhedzisiro
Imwe yenhengo dzakakosha uye dzinoshanda mumuviri wemunhu huropi. Iyo yakavharirwa mukranani uye inoumbwa nemamirioni emaseru etsinga uye zvinyoro zvinyoro. Kunyangwe hazvo uropi huchi chengetedzwa nekranani, inogona kubatika kuipa kana kurova.
Kana iyo uropi ichizununguswa zvakanyanya zvine chisimba mukati mekranani, kukuvara kunogona kuitika kune zvinyoro nyoro kana maseru etsinga. Iko kukuvara kunogona kukanganisa mashandiro ehuropi, izvo zvinokanganisa maitiro emunhu akakuvara. Uku kukuvara kunowanzo kutaurwa sekupokana.
Kudzivirira Kukuvara Senge Mhedzisiro
Kana munhu achiramba achiwana mabiko nguva dzose, kukuvara kwehuropi kusingaperi kunogona kuitika zvichikonzera nyaya dzepfungwa. Varume vanoita kunge vari panjodzi yekukanganiswa kana vachienzaniswa nevakadzi sezvo vachitamba mitambo yekudyidzana uye vanowanzo pinda mukukonana kwakawanda.
Vana zvakare vane mukana wakakura wekuwana mabiko nekuti vanowanzo kudonha zvishoma pavanotamba.
Kudzivirira mhedzisiro kubva mukuitika kwakakosha zvakanyanya kana munhu asingade kurarama hupenyu hwavo hwese achitarisana nedambudziko senge kurasika ndangariro, kufenda uye kuwedzera kubata chirwere cheAlzheimer.
Pazasi pane nzira shoma dzekudzivirira kukanganiswa.
Ruzhinji rwekupokana runotsigirwa panguva yenjodzi dzemotokari. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti ugare nebhanhire rako pese paunenge uri mumotokari inofamba. Musoro unochengetedzwa kubva pakurova pakaoma mukati memotokari kana ukapinda mutsaona. Mhegi yemhepo yakashongedzerwa mota inowedzera kudzivirira iye mutyairi uye mutyairi kubva mukukanganisa kukuru.
Tsaona dzinoverengeka imhedzisiro yekutyaira kwekutyaira uye dzinogona kukonzeresa mhedzisiro. Hazvina basa kutaura kuti kunwa uye kutyaira musanganiswa unotyisa.
Vakwegura vari panjodzi yekudonha sezvo ivo vachiwanzo kurasikirwa nekugadzikana kwavo uye kuenzana sezvavanokura. Kuti kuderedze kudonha, vakuru vanofanirwa kupfeka shangu dzakapetana heeled. Kana mukuru aine dambudziko rine chekuita nezvehutano rinokanganisa kugadzikana kwavo, vanofanirwa kushandisa tsvimbo kana wiricheya kudzivirira kudonha uye kuwana mhedzisiro.
Vana vanofanirwa kudzivirira kutamba munzira kana munzira. Kana ivo vachirovera misoro yavo pane idzi dzakaoma nzvimbo, ivo vanogona kuwana mhirizhonga. Vana vadiki vanofanirwa kutariswa zvakanyanya nekuti vanogona kudonha kubva pamibhedha kana kurovera misoro yavo vachimhanya.
Avo vanotamba mitambo yekubatana, vanoenda kuchovha bhasikoro kana kutora chikamu mune mimwe mitambo yemitambo vanoda kupfeka magiya akakodzera emusoro kudzikisira kukuvara kwemusoro.